जनचासोका बिषयमा चुइक्क नबोल्नेलाई कहिलेसम्म ‘सेलेब्रेटी’ मान्नुपर्ने ?
इटहरीः सेलेब्रेटी या भनौं, कलाकार भनेका को हुन् त ? यहाँबाट सुरु गरौं । कलाकारलाई देशको गौरव भनिन्छ अनि सिनेमालाई समाजको दर्पण । भनेपछि कलाकारहरु समाजको दर्पणका लागि काम गरिने पात्रहरु हुन् । समाजका लागि काम गरिने पात्र । फेरि यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ, उसोभा कलाकारको काम के ? खाली सिनेमा मात्र गरिरहनु कलाकारको काम हो ? जरुर हैन्, त्यो कसरी हैन् ? अब यहाँ दुई पुस्ताका दुई चर्चित नेपाली कलाकारको चर्चा प्रस्तुत गरिएको छ ।
पहिलोः राजेश हमाल । हमाल अर्थात थुप्रै नेपालीहरुको ‘आदर्श पुरुष ।’ उनको बारे खोज्दै जाँदा उनि चलचित्र क्षेत्रमा मात्र काम गरेर आदर्श बनेका हैनन् । समाजसँग भावाना जोडिएको छ, उनको । उनि जातिय विभेदको विषयमा कार्यक्रम चलाउँछन् । युवा शसक्तीकरण तथा उत्प्रेरणा सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्छन् पनि । विद्यार्थीहरुको ज्ञान बारे हाजिरी जवाफ कार्यक्रम संचालन गर्दछन् । र, यस्ता थुप्रै विषयहरु जो समाजमा पीडा परेकाहरुको आवाज बोलिदिन्छन् । राजनीतिबारे ज्ञान राख्छन् । त्यसैले त राजेश हमाल नेपालीहरुको कलाकार मात्र हैन्, भावाना पनि हो । कयौं बुद्धिजीवीहरुको पनि आइडल हुन् ,राजेश हमाल ।
दोस्रोः बिपिन कार्की । कार्कीको कुरा गर्नुपर्दा उनका धेरै नेपाली प्रशंसक छन्, उनको जिबन्त अभिनयको प्रशंसक म पनि हो । बिडम्बना उनी जति राम्रो अभिनय गर्छन्, त्यति समाजसँग घुलमिल भइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । उनी आजसम्म कुनै सार्वजनिक महत्वका विषयमा (फिल्म) बाहेकका जनचासोका विषयमा बोलेको मैले देखेको छैन् । उनको सामाजिक संजालहरु नियाल्दै गर्दा उनका प्रशंसकको पनि चित्त बुझ्दैन् । देशमा भइरहने विभिन्न खाले गतिविधिहरुमा मैले मन पराएको कलाकारले के सोच्छ होला ? भन्ने धारणा सबैको हुन्छ । तर कार्कीले आजसम्म त्यस्तो कुनै समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको पाइदैन् ।
उल्लेखित दुई कलाकारले नेपाली सिनेनगरीको दुई पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्नो समयमा धेरै रुचाइएका कलाकार । यसरी भनौं, ‘सेलेब्रेटी वीथ जीरो हेटर्स’ । र, उनीहरूबिचको फरक भनेको व्यक्तित्व हो । हमालले फिल्ममा मात्र काम गरेनन्, हालत समाजसँग भावना जोड्ने काम गरेरगरिरहेका छन् । अतः उनी देशका नायक बने । अर्का अभिनेता कार्की सिफ्र अभिनय गर्छन् । र, प्रशंसक बटुलेका छन् । झट्ट हेर्दा सामान्य देखिएको विषय भएपनि कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले सार्वजनिक चासोका विषयमा आवाज बुलन्द गरिदेओस् भन्ने उनका प्रशंसकले चाहाँन्छन् । आजसम्म जनचासोका विषयमा चुइक्क बोल्दैनन् । उनको अभिनयलाई मात्र मन पराईरहेका कार्कीको अभिनय यात्रामा सकिएपछि उनका प्रशंसक यहि रेसियोमा रहि रहलान ?
एकजना यसै क्षेत्रका अनुभवी कलाकार भन्छन् – ‘कलाकारले समाजकै कथामा अभिनय गर्छन् । विभेद, संघर्ष, अन्याय, अत्याचार, शोषण । अभिनय नै उनीहरूको आवाज हो, तसर्थ सामाजिक सञ्जालमा बोलिराख्नुपर्छ भन्ने छैन् ।’
उनको तर्क पनि एकहदसम्म ठिकै होला । तर के, अभिनय र वास्तविक जीवन फरक छैन् र ? अभिनय कर्म मात्र उनिहरूको धर्म हो त ? आफूले आइडल मानेको कलाकारबाट प्रशंसकको अपेक्षा सिने क्षेत्रको काममा मात्र हो त ? यो प्रश्न सधैभरी मन गडिरहने छ ।